Kedu ka ị ga -esi budata usoro efu na Telegram | Nzukọ mkpanaka
N'ụzọ dị oke egwu, ị nwere ike nụla ma ọ bụ gwa gị na site na Telegram ị nwere ike ime ihe karịrị ikwu okwu ma ọ bụ mee gif. Ọ dịkwa otu a, n'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ na -abanye n'ọwa dị iche iche nke ha na -ebipụta ọdịnaya nke ụdị niile nwere ike baara gị uru. Ọ bụ ebe ahụ ka anyị na -ahụ ajụjụ na kedu ka m ga -esi budata usoro efu na Telegram, gịnị kpatara ị ga -eji jikọta okwu ọnụ Telegram usoro na nbudata priori na -ada ụda nzuzu, mana ee, enwere ụdị ihe a, anyị ga -agwa gị otu esi eme ya.
Yabụ na enweghị nkwuwa okwu, enwere ọtụtụ ụzọ ibudata ọdịnaya mgbasa ozi dị ka ihe nkiri ma ọ bụ usoro sitere na Telegram na ọ bụ ekele maka bots akpaaka nke ngwa ahụ nwere na ọwa dị iche iche. N'ezie, oke iwu abụghị na ọ bụ ya mere ọ dị gị n'aka iji usoro a ma ọ bụ na ị gaghị. A na -eji bots ndị a ịchọ ọdịnaya ụfọdụ anyị chọrọ na ọwa ọha ma ha nwere ike ịba uru nke ukwuu. N'ezie, lee ma ọ bara uru ma dịkwa mfe na ị chọghị ngwa mpụga ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ karịa Telegram. Mana echegbula onwe gị maka nnukwu data mberede, ka anyị bido site na ihe bots ndị a bụ.
1 Kedu ka bots si arụ ọrụ iji budata usoro na Telegram?
2 Kedu otu esi esonye na ọwa ibudata usoro na Telegram?
2.1 Kedu otu m ga -esi chọta ihe nkiri ma ọ bụ usoro nke m na -ebudata na Telegram na ekwentị mkpanaaka m?
Kedu ka bots si arụ ọrụ iji budata usoro na Telegram?
Iji nye gị echiche, ha abụghị ihe dị iche na bots ndị ọzọ nwere ike ịbụ na Telegram ma ọ bụ na mmemme ndị ọzọ dị ka Discord. Ha bụ bots na -arụ ọrụ n'otu ngwa Telegram yana na ebumnuche ha abụghị naanị ịgwa gị ụfọdụ data preconfigured site na otu onye, dịka ọmụmaatụ, gwa gị oge kwa ụbọchị n'otu oge ma ọ bụ ihe masịrị anyị, ka ibudatakwa ihe. Mana ọ bụ na ha abụghị naanị usoro, ọ nwekwara ike ịbụ egwu dịka anyị kwuru ma ọ bụ ihe nkiri. Iwu bụ ihe pụtara ìhè site na ọnụnọ ya, buru n'uche na ọ bụ ọrụ gị.
Usoro nke bot na -eso na nke ị ga -amata bụ ihe ndị a:
Iji bido, ị ga -edo anya nke bot ị chọrọ ma ọ bụ jiri njikọ ị na -ahụ na ịntanetị maka bot ahụ. Ugbu a, ị ga -pịa mmalite mgbe ị mepere mkparịta ụka na bot. Mgbe nke a gasị, ị ga -eji iwu ya nke ọ ga -egosi ma ọ bụ mepee nyocha mgbe ụfọdụ ma ị ga -azaghachi agụụ gị ịgbaso ntuziaka ahụ. N'ikpeazụ, ị nwere ike wepu nkata na listi mgbe ị na -echeghị iji ya ọzọ.
Buru n’uche na ọbụlagodi na ị na -agwa ya okwu, ọ gaghị aza gị, ọ bụghị onye nọ n’azụ na -ekwu okwu, ọ bụ bot ka emebere inye gị ụfọdụ ihe. Ha nweere onwe ha kpamkpam ma ị nweghị oke bots ịwụnye ma ọ bụ ahazi ya na Telegram. Naanị mgbe ike gwụrụ gị ka ị na -ehichapụ, ị gaghịzi ahazi bot ahụ. Ugbu a, anyị ga -agwa gị otu ị ga -esi jiri bọtịnụ nbudata sonye na ọwa ndị ahụ.
Kedu otu esi esonye na ọwa ibudata usoro na Telegram?
Nke a dị nfe, anyị ga -enyekwa gị aha ọwa dị iche iche nke gị onwe gị nwere ike chọọ na Telegram wee sonye na -echegbu onwe gị. Ozugbo ị rụnyere ngwa ahụ, ọ bụrụ na ịnweghị ya, ị ga -aga na nchọta nchọta wee banye aha ọwa anyị ga -etinye ebe a n'okpuru iji nwee ike isonye na ọwa. Achọghị ọzọ.
Ihe nkiri x Google Drive Latino
Popụ ọtụtụ cinemas
Dale egwu nkiri
Dale na -egwu ihe nkiri
Usoro na Esemokwu
Anyị na -akwado na ozugbo ị sonyere ọwa, n'ihi na ọ bụrụ na ịgaghị enwe ọkwa na Telegram kwa ụbọchị na ọ bụ ihe na ahụmịhe anyị na -akpasu iwe. Ịgaghị enwe ike ịbanye na ọwa ndị a n'ihi na ha na -ebugo akụkọ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị nwere usoro ma ọ bụ ihe nkiri n'uche nke ịchọrọ ịhụ, ị ​​nwere ike ịgbalị mgbe niile ịhụ ma ebugoro ya na ọwa ekele bot. Maka nke ahụ, ị ​​ga -eji ihe nchọta n'onwe ya wee tinye aha ma ọ bụ chọọ faịlụ a na -achọ na faịlụ nchọta faịlụ ebugoro.
Otu esi agwa gị akụkọ sitere na Telegram
Nke ahụ ga -adị mfe, n'ezie. Naanị site na isonye na ọwa wee malite ibudata ọdịnaya ozugbo ịchọgharịrị wee chọta ya, ị ga -enwe ike ịhụ usoro na Telegram na ọbụna ihe nkiri, n'ihi na anyị agbakwunyere ọwa na -egosikwa ha. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ozugbo ibudatara, anyị ga -enye gị ntakịrị ndụmọdụ. Ọ bụghị n'efu, ọ bụ na anyị ahụla na ọ bụ ihe na -eme ugboro ugboro na nbudata usoro na Telegram.
Kedu otu m ga -esi chọta ihe nkiri ma ọ bụ usoro nke m na -ebudata na Telegram na ekwentị mkpanaaka m?
Maka na ọ dị otu a, Telegram anaghị echekwa ihe ebudatara na ndabara. Ị ga -eji aka gị mee ya na ọwa niile. Maka nke a anyị ga -akọwara gị ya ngwa ngwa, echegbula na na Mobile Forum anyị ga -enyere gị aka ruo ọgwụgwụ.
Iji bido, chọọ ihe nkiri ma ọ bụ usoro ahụ na Telegram nke ịchọrọ ịhụ. Ugbu a ị chọtara ya, bido ibudata ya (cheta na ị ga -aga na ihe nchọgharị faịlụ mkparịta ụka ma ọ bụ chọọ site n'aha edere). Ugbu a ị ga -achọ gaa na nchịkọta nhọrọ nke nwere ntụpọ atọ ị chọtara na akuku aka nri elu nke ihe nkiri ahụ ị na -ebudata, menu nke ngwa na nhọrọ, ị mara. Ugbu a pịa nhọrọ ịchekwa na nbudata ka ekwentị gị wee chekwaa ihe nkiri ahụ na folda nbudata nke nchekwa ya. Ma dị ka nzọụkwụ ikpeazụ, naanị ihe ga -eme bụ imepe onye njikwa faili, ugbu a nchekwa dị n'ime wee banye nchekwa nbudata.
Yabụ, nke a ga -abụ ya, ị gaara achọworị ma budata faịlụ nke ihe nkiri ahụ ma ọ bụ usoro Telegram ka oge ọ bụla nwee mmasị na -ekiri ya. Na mgbakwunye yana dị ka mpempe ozi, Ị nwere ike ịhụ ọwa ọjọọ na -abụghị naanị na -ebipụta njikọ nbudata, kamakwa nwere njikọ ịlele na ntanetị. Ọ bụ ya mere na ụjọ ekwesịghị ịtụ gị, ọ bụ nhọrọ ọzọ. Ọwa ndị a na -enwekarị nhọrọ nke ọzọ, ya bụ, nbudata na -adị, mana mgbe ụfọdụ enwere nlele n'ịntanetị.
Anyị nwere olile anya na akụkọ a baara gị uru na site ugbu a gaa n'ihu ịmara ka usoro na ihe nkiri Telegram si aga ka ọ ghara ijide gị na -agafe. Hụ gị na edemede Mobile Forum na -esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » telegram » Kedu ka ị ga -esi budata usoro efu na Telegram
Ụkpụrụ PowerPoint kacha mma maka Mmụta